« Rangotra »: kanto, hanehoan’ny tanoran’Ampefiloha ny heviny | NewsMada
« Rangotra »: kanto, hanehoan’ny tanoran’Ampefiloha ny heviny
Mahaliana sy mampieritreritra ary mifono hafatra samihafa ny fampirantiana hita eny amin’ny foiben’ny ADMC-Craam, eny Ankatso, nanomboka ny alarobia teo. Fitaovana iray enti-maneho hevitra sy manentana ny fiarahamonina, hiara-kanangana hoavy tsara kokoa, ny zavakanto. Hita taratra izany ao anatin’ity hetsika iray ity.
Tsy iza ireo mampiranty ny vokatry ny aingam-panahiny ireo fa ny mpanakanto mipetraka sy mifanerasera ary mifanakalo, eny amin’iny fokontany Ampefiloha ity. Mivondrona anaty fikambanana iray izy ireo, antsoina hoe Jamerla Koonaction. Iray ny fomba fijery : ny fampiroboroboana ny zavakanto hoenti-mampivoatra ny fiarahamonina.
« Rangotra » ny lohahevitry ny fampirantiana, hoenti-maneho fa samy manana diam-penina na nampita ny heviny ao anatin’izany ireo mpandray anjara, avy amin’ny sokajin-kanto samihafa. Anisan’ireo faritra mihetsiketsika ny ao Ampefiloha raha ny tontolon’ny zavakanto. Hita taratra mazava ao ny firaisankina sy ny fiombonana eo amin’ny samy mpikolo ny kanto. Tsy vao izao mantsy ny nisian’ny hetsika iraisana toy ity fa efa matetika. Tsy hifarana moa ny fampirantiana raha tsy ny 28 novambra izao.